Safiirka Turkiga ufadhiya Somaliya oo gudoonsiiyey. – Kismaayo24 News Agency
by admin 17th May 2019 071
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Amb. Mehmet Yilmaz ayaa qalabka farshaxanka guddoonsiiyay Wiil dhalinyaro ah oo dhowaan sawir gacmeed ka sameeyay sawirka Safiirka Turkiga ee Muqdisho iyo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan.
Wiilka dhalinyarada oo lagu magacaabo Abshir Taaktika ayaa dhowaan baraha bulshada ku soo bandhigay sawirka Madaxweynaha Turkiga oo si cajiib ah sawir gacmeed uu ka sameeyay, waxaana lagu martiqaaday Safaaradda Turkiga ee Muqdisho.
Danjire Mehmet ayaa boggaadiyay hal abuurka wiilkan dhalinyarada ah, waxaana uu guddoonsiiyay hadiyad laga keenay Turkiga oo ahaa qalabka wax lagu sawiro ee farshaxanka ah, taasoo ah mid dhiiragelin ah.
Sidoo kale Safaaradda Turkiga ayaa deeq waxbarasho ugu yaboohday wiilkan dhalinyarada ah, gaar ahaan Kulliyadda Artist ama Farshaxanka oo uu ka baran doono Jaamacad ku taal dalka Turkiga.
Turkiga oo taageera Soomaaliya, kana mid ahaa dalkii u horeeyay ee u soo gurmaday xilligii abaaraha sanadkii 2011, xilligaasoo Muqdisho booqasho ku yimid Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan iyo qoyskiisa, waxaana taasi keentay in shacabka Soomaaliyeed aanay quluubtooda ka go’in dadaalka Madaxweyne Erdogan, oo ay taageero weyn u muujiyaan.
Daawo: Ra’isul wasaare kheyre oo Xalay saqdii dhexe Ubax dhigay taallada SYL oo lagu xasuusto Dhalinyaradii Halgamayaasha
Qaxooti Yemeni ah oo isku hor gubay afaafka hore ee xafiiska hey’adda UNHCR ee Magalada Hargeysa
admin 6th October 2015 6th October 2015